डा. अरूणा उप्रेती - कान्तिपुर समाचार
विवेकी डाक्टरको अविवेकी चाला
केही दिनअघि मैले एउटा हिन्दी फिल्म हेरेकी थिएँ । त्यसमा निजी अस्पतालको कहलिएको डाक्टरले बढी शुल्क असुल्न बिरामीलाई बढी समय अस्पतालमा राख्दा र बेवास्ता गर्दा कसरी एक बालकको मृत्यु हुनपुग्यो भन्ने देखाइएको छ । बालककी आमा त्यो डाक्टर विरुद्ध कानुनी लडाइँ लडछिन् र अन्ततः जित्छिन् ।
२५ वर्षअघि ४२ वर्षीया महिलालाई अस्पतालमा ल्याइयो । ती महिला पेट दुखाइले आलस–तालस थिइन् । जाँच गरेपछि डाक्टरले सोधे, ‘गर्भ त रहेको थिएन ?’ ‘कसरी हुन्छ र, ३ साता अघिमात्र सुरक्षित गर्भपतन गरिएको हो,’ उनको जवाफ थियो । डाक्टरले परिवारका मानिसलाई भने, ‘एकटोपिक प्रेगनेन्सी (पाठेघर बाहिरको गर्भ) जस्तो छ । त्यो गर्भ फुटेर धेरै रगत बगेको छ । तुरुन्तै शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।’ तत्काल रगत प्रबन्ध गरी शल्यक्रिया गरेपछि उनको ज्यान बच्यो ।
बच्चालाई मन्दविष !
‘मेरा छोराछोरीले खाना खानै मान्दैनन्, उनीहरूलाई चकलेट र आइसक्रिम मात्र भए पुग्छ । के गर्ने ?’ धेरै बाबुआमाले यस्तो गुनासो गरेको सुनिन्छ । यसमा समस्या केटाकेटीमा होइन, आमाबाबुको बानीमा हुन्छ ।
खान जाने स्वस्थ
मेरा बाजे मुरलीधर उप्रेतीको मृत्यु मधुमेहले भएको थियो । मेरी फुपू र उनका ४ छोरी मधुमेहका रोगी छन् । मेरो ठूलो बुबाका छोराको मृत्यु हृदयरोगले भएको थियो । उहाँ पनि मधुमेहको बिरामी हुनुहुन्थो । वंशानुगत रूपमा म मधुमेह हुनसक्ने सम्भावना भएकी महिला हुँ ।
म्यान्मारमा नेपाली भाषा प्रेम
म्यान्मारमा नेपालीभाषी उद्योगपति शंकर परालुजीसँग भेट भयो । उनले सुनाए, ‘हाम्रा छोराछोरीलाई वर्षमा तीन महिना नेपाली भाषा पढाउन स्कुल खोलेका छौं । नेपालीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका शिक्षकलाई छुट्टीका बेला पढाउन आग्रह गर्छौं । छोराछोरीले नेपाली भाषा नबिर्सिउन् भनेर कोसिस गरिरहेका छौं ।’
डा. अरूणा उप्रेतीका लेखहरु :
हामी सानो हुँदा हजुरआमाले बनाउनुहुने सुत्केरी मसलाको सुगन्धले भान्छा नै सुवासित हुन्थ्यो । हामी पनि घुटुक्क थुक निल्दै सुत्केरी मसला कहिले पाक्छ भनेर हेरिरहन्थ्याैं। पाकेपछि हजुरआमाले एक–एक चम्चामात्रै चाख्न दिनुहुन्थ्यो ।